Ciidamada Dawlada Soomaaliya Ayaa hoolgalo kawada gobalaka shabeelada dhexe – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dawlada Soomaaliya Ayaa hoolgalo kawada gobalaka shabeelada dhexe
Ciidamada Milateriga dowlada Somalia ayaa saaka howlgalo balaaran oo baaritaano ah ka wada degaanka Masaajid Cali guduud oo ka tirsan gobolka Sh/dhexe.
Howgalkan baaritaanka ah ayaa yimid ka dib markii shalay gelinkii dambe degaankaas qarax miino lagula eegtay gaari ay wateen ciidamada kaasoo wararku sheegayaan inuu geystay khasaare nafeed inkastoo aan tirakoob sax ah laga heynin.
Goob joogayaal ku sugan degaanka Masaajid Cali guduud ayaa sheegaya in ciidamada dowlada ay saaka baaritaan kula dhaqaaqeen gaadiidka iyo guryaha degaanka, iyagoo baadi goobaya rag ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo la tuhunsan yahay iney geysteen qaraxii shalay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadu ay garaaceen shaqsiyaad ka tirsan dadka degaanka oo ka hor yimid in la baaro guryahooda iyo goobaha ganacsiga, iyagoo ka cabsi qabay in askartu ay gacmo gacmeystaan hantidooda.
Lama oga in ciidamada dowladu ay dad ku soo xirxireen howlgaladan iyo in kale, mana jiro war ka soo baxay saraakiisha milateriga iyo masuuliyiinta gobolka oo ku saabsan baaritaanada.
Xoogaga Al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku haya ciidamada milateriga dowlada oo dhowaanahan isku balaarinayey tuulooyin iyo degaano kale oo ka tirsan gobolka Sh/dhexe kuwaasoo horey ay Al-shabaab ay u xukumeysay balse laga fara maroojiyey.
Ciidamada Amisom ayaa loo kordhiyay joogitaan kooda soomaaliya
Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo oo saaka ku wajahan Dhuusa Mareeb